Regai Dombo Rako Nyeredzi Chipenye | Martech Zone
Svondo, Zvita 4, 2011 Douglas Karr
Duke Long anomhanya a yekutengesa real estate blog uye nguva pfupi yadarika akandibvunzurudza pachirongwa chake kuburikidza neGoogle + Hangout Musoro uyu wakakosha… muindasitiri umo vatungamiriri vanogara vachidzora, vachiverengerwa, uye… pamwe… pamwe nevamwe vanhu, unoita sei masimba meseji yacho?
Zvichitaurwa zviri nyore, iwe masimba meseji nekutora vanhu chaivo uye nekuvarega vachiita zvavakanakira. Mukutengeserana real estate, iro bhizimusi chiremera uye bhizinesi hukama izvo vamiririri vanokudziridza ndicho chakakosha pakubudirira kwavo. Kuwedzeredza netiweki iyi munharaunda chinhu chakakosha. Regai nyeredzi dzenyu dombo ngadzipenye!
Heino hurukuro… nemamwe mabluke kuona kuti hatikanganise:
Makambani anonetsekana kuti kana mushandi achionekwa senge nyeredzi yedombo, vari kurega kutonga neimwe nzira. Fembera chii, iwe nguva dzose kurega kutonga. Vatengi vanonzwisisa kuti vanhu vanouya vachienda… kunyanya vane tarenda. Kana iwe uine hanya kuti rock yako nyeredzi ingasiya uye inotora network pamwe navo, ita izvo zvaunoda uchengete ivo. Asi kana vakaenda, ivo vanoenda kana iwe kana kwete iwe rega ivo vave ne twitter account.
Mukana wekuita purofiti nekukura nekurega nyeredzi dzako dzedombo dzipenye munhau dzezvemagariro dzakanyanya kupfuura kuisa vashandi vako mukeji mavanonzwa kuti havana simba kana mukana. Izvo, pamwe chete nekurasikirwa nehunyanzvi, kutaurirana, uye bhizinesi ravanogona kuwana kubva pasocial media inzira yekuwana njodzi.
Tags: simbakutengesa zvivakwamushanyeredzi dzedombo
Iyo Isingamisike Ecommerce Wave